शख्तर डोनेस्कको पोष्टमा सिटीको ६ गोल, जिससको ह्याट्रिक ! - शख्तर डोनेस्कको पोष्टमा सिटीको ६ गोल, जिससको ह्याट्रिक !
शख्तर डोनेस्कको पोष्टमा सिटीको ६ गोल, जिससको ह्याट्रिक !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २२ कार्तिक, 09:13:47 AM
लण्डन । च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटीले युक्रेनी क्लब शख्तर डोनट्स्कको पोष्टमा ६ गोल हानेको छ । आफ्नै घरेलु मैदान इतिहाद रंगशालामा भएको खेलमा सिटीले शख्तर नोनट्स्कलाई ६–० गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो ।
सिटीको जितमा ग्रबियल जिससले ह्याट्रिक गोल गरे भने डेभिड सिल्भा, रहिम स्ट्रर्लिङ र रियाद महारेजले एक एक गोल गरे । समूह एफ अन्तर्गत नै गएराति भएको खेलमा लियोन र होफेनहाइमले २–२ गोलको बराबरी खेलेका छन् ।
४ खेलबाट ९ अंक बनाएको सिटी समूह एफ को शीर्ष स्थानमा छ । त्यस्तै, सिटीसँग पराजित भएको शख्तर डोनट्स्क २ अंकसहित समूहको पुछारमा छ ।
२०७५, २२ कार्तिक, 09:13:47 AM
बार्सिलोना च्याम्पियन्स लिगको नकआउट चरणमा !
कसले जित्ला च्याम्पियन्स लिगको उपाधि ?